यस मामला मा छैन अन्तिम कारक - आफ्नो घर वा अपार्टमेन्ट छ जो हरेक मानिस, आफ्नो आवास सुन्दर र स्टाइलिश र चिल्लो छत थियो सपना। यसलाई त्यहाँ मूल झाड, स्थान प्रकाश वा backlighting छन् कि त्यहाँ, ढाँचाहरू र आकारहरू छन् कि कुरा छैन। मुख्य कुरा हो - ती बराबर छन्। त्यसपछि कोठा प्रभावशाली हेर्न र समाप्त नजर हुनेछ। त्यसैले, मर्मत गर्न सुरु गर्ने जो कोहीलाई पनि, पहिलो छत align गर्ने बारे विचार गर्नुपर्छ र तपाईं के गर्न आवश्यक छ। के सामाग्री चयन गर्न: Drywall वा प्लास्टर? यो प्रश्नको जवाफ अद्वितीय हुन सक्दैन, यो खाता धेरै कारक मा लिन आवश्यक छ, गलत हुन सक्दैन।
छत कसरी पंक्तिबद्ध Drywall को मद्दतले?
छत कसरी पंक्तिबद्ध plasterboard? धेरै unenlightened मान्छे यो कुनै ठूलो सम्झौता हो भन्ने लाग्छ। तर सबै कुरा यति सजिलो छ, तपाईंले केही सीप छ गर्न आवश्यक छ। छत पङ्क्तिबद्ध प्रविधि - यो एकदम समय-खपत छ।
प्रक्रिया गर्न प्राप्त, पहिलो चरण को पर्खालहरु संलग्न छ गाइड प्रोफाइल। यसबाहेक, जिप्सम बोर्ड को चौडाई खरिद थिए कि आधारमा केन्द्रीय प्रोफाइल fastened जुन धारकों, माउन्ट हुन अनिवार्य छ। तिनीहरूलाई बीच अंतर एक तिनीहरूलाई केन्द्र फिक्सिंग पार को रूप मा पानाहरू प्रत्येक केन्द्र मार्फत पारित गर्न अनुमति दिन्छ कि हुनुपर्छ, त्यसैले तिनीहरू sagging छैन।
प्रोफाइल पाना बीच माउन्ट गर्नुपर्छ भनेर एक र एउटै प्रोफाइल दुई क्रमिक पाना fastened। प्रोफाइल र हैंगर dowels प्रयोग गरेर पर्खाल गर्न निश्चित गर्नुपर्छ। स्क्रू मार्फत प्रोफाइल संग plasterboard पानाहरू यौगिकों।
Drywall स्थापना विशेषताहरु
छत कसरी पंक्तिबद्ध बुझ्न, यो Drywall निर्माण को स्थापना को सुविधाहरू थाहा आवश्यक छ। यो भूमि जिप्सम गर्न छत देखि दूरी अनुपालन मा छ। सबै कसरी असमान छत, जो आफ्नो आकार र के छेउमा bevels निर्भर हुनेछ। यस्तो संरचना माउन्ट, तपाईं पहिलो लम्ब सम्मिलित छन्, जो मा grooves संग पर्खाल र अनुदैर्ध्य प्रोफाइल सुरक्षित हुनुपर्छ। काम हरेक चरण पूर्ण चिल्लो छत थियो भवन स्तर जाँच गर्न निश्चित हुन।
Drywall कसरी स्थापना गर्ने?
अर्को चरण - पहिले निर्माण संरचना Drywall पानाहरू स्थापना गर्न। therebetween मिलिमिटरमा को एक जोडी को एक दूरी छोड्न पर्छ, र प्रत्येक संरचना प्रत्येक सामाग्री रूपमा घटना र तीव्र तापमान परिवर्तन मा विस्तार हुन सक्छ। plasterboard पानाहरू फिक्सिंग, तिनीहरूले समाप्त गर्न अगाडि बढ्न सक्छ। Drywall निर्माण को सम्पूर्ण क्षेत्र - तर तपाईं पहिले पानाहरू जंक्शन मा seams, र त्यसपछि प्रक्रिया गर्न आवश्यक छ। यो गर्न, Masking टेप लिन र पुटीन, सबै जोडहरुको लागि सानो को एक पत्र लागू र राम्रो बनेको छ। पुटीन जोइन्टहरूमा सुकाएपछि पानामा सम्पूर्ण क्षेत्र लागू गर्न सकिन्छ।
धेरै मानिसहरू छत पुटीन वा अन्य मिश्रण पंक्तिबद्ध कसरी आश्चर्य। त्यो अत्यन्त कठिन छैन, तर तपाईं उपकरण हुनुपर्छ:
रंग वा वालपेपर: छत यसलाई पूर्ण अघिल्लो कोटिंग्स को खाली मात्र पछि सुरु align। त्यहाँ कार्य अनियमितताहरु हो भने, तिनीहरूले एक विशेष चुच्चो संग पंच प्रयोग गरेर तल कटौती हुनुपर्छ। छत साफ पछि, यो primed हुनुपर्छ। राम्रो स्पन्जले गहिरो प्रवेश साफ र व्यापक ब्रश वा रोलर संग primed गर्न आवश्यक छ। को फिलर छत कसरी पंक्तिबद्ध बुझ्न, तपाईं त्यहाँ spackling धेरै चरणमा छन् भनेर थाहा हुनुपर्छ।
पहिलो चरणको। Caulking सुरूवात
को प्राइमर पछि एक घण्टा यसलाई पुटीन को आवेदन गर्न अगाडि बढ्न सुरक्षित छ, सुकेको छ - यो पत्र planarization हुनेछ। तसर्थ, सुरु विकल्प प्रयोग र कुनै 1 भन्दा बढी सेमी लागू गरियो। यसको घनत्व फिलर न्यूनतम sags सुकाउने समयमा यो गर्न खट्टा क्रीम जस्तै गर्नुपर्छ अनुसार छ। छत राम्रो लगायो छ गर्न, आम एक धातु TROWEL लागू गर्नुपर्छ।
दोस्रो चरण। प्लास्टर समाप्त
समाप्त प्लास्टर दुई पत्रहरु मा लागू हुनुपर्छ। कोठा तापमान मूल्य 15 भन्दा डिग्री छ, र क्षेत्र राम्रो ventilated छ भने, दोस्रो तह केही घण्टा भित्र बढीमा, अर्को दिन लागू वा, गर्न सकिँदैन। को spackling अन्त्य गर्न औसत स्पाटुला प्रयोग गर्न आवश्यक छ। कोठा बीस भन्दा बढी वर्ग मीटर छ भने, यो स्प्रेडर प्रयोग गर्न सम्भव छ। मुख्य नियम - सबै भन्दा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न एक दिन राख्नु दुई कोट।
तेस्रो चरण। sanding
तपाईं कोठा मा इच्छित वायुमण्डलीय अवस्था पालन भने, यो अर्को दिन निकाल्ने shkurit गर्न सम्भव छ। तरिका यो प्रक्रिया गति, यो लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ vibroshlifovalnuyu मिसिन। र मन मा सावधानीहरु राख्न निश्चित हुन: आफ्नै सुरक्षा विशेष वेंट र respirator संग घाम लगाउने गर्नुपर्छ लागि।
को काठ छत कसरी पंक्तिबद्ध?
को align गर्ने बारे सोच भएका मान्छे छत काठ छ, यसलाई प्लास्टर को पातलो तह काम गर्ने छैनन् यसलाई के थाहा उपयोगी हुनेछ। Plastered छत मात्र ग्रिड वा shingle प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। उत्तरार्द्ध दुई पत्रहरु मा 45 डिग्री को एक कोण मा पैक। पहिलो आवश्यक लागि असमान मोटाइ shingles कहीं5मिमी लिन। को battens बीच दूरी5सेमी भन्दा कम छैन।
पनि लिइरहेको दोस्रो तह र चिल्लो रैक र 5-10 सेन्टीमिटरको पिच संग पहिलो पंक्ति 90 ° तिनीहरूलाई खचाखच भरिएको लागि, utaplivaja नङ ढक्कन। अर्को शीर्ष shingles प्लास्टर लागू, र त्यसपछि विशेष grater यसलाई हटाउन आवश्यक छ। प्लास्टर अलिकति कठोर पछि यो, एक परिपत्र गति मा गर्नुपर्छ। तपाईं प्लास्टर moisten गर्न आवश्यक पर्दछ।
त्यसैले, छत कसरी पंक्तिबद्ध, जो यसलाई फरक सजावट र ढाँचाको प्रदर्शन गर्न सम्भव हुनेछ एक चिल्लो र पूर्ण चिल्लो सतह प्राप्त गर्न? यो उपस्थिति असर किनभने उच्च गुणवत्ता र हतार बिना: जवाफ छ छानो, र finishes जीवन। त्यसैले, तिनीहरूको क्षमता, सीप र ज्ञान पनि विश्वस्त छन् जो मानिसहरू, यो राम्रो समय र पैसा बचत गर्न व्यावसायिक मदत माग्न छ। तिनीहरूले पनि यसलाई छत स्तर को लागत कति, शीघ्र।
बरामदा - यो के हो? balconies र loggias को प्रकार। को बरामदा प्रयोग गरेर। भित्र loggias पूरा (फोटो)
KamAZ "selhoznik" (मोडेल 5511 र 55103)
केक र Piskarev: अक्षरहरू एन वी Gogolya को तुलनात्मक विशेषताहरु
छाला को जलन: के?
लोक संस्कृति। रूसी लोक संस्कृति। लोक संस्कृति र परम्पराको
मिश्रण "Semper": लाभ र मिश्रण को समीक्षा
पतिको खजाना: कसरी बाँच्न सकिन्छ?